Ygeman: Soomaalida diidmo ayaa la siinayaa, wadankooda ayaa lagu celinayaa - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirka arimaha gudaha Sweden Anders Ygeman ayaa warbaahinta u sheegay in ay dowlada Soomalia kala hadlayaan dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee sharciga loo diiday. Wasiirka ayaa wargeyska Dagens Industri u sheegay in qaxooti badan oo Soomaali ah diidmo la siin doono balse ay dhibaato ka haysato dowladiisa sidii ay dadkaasi wadankoodii ugu noqon lahaayeen.
Wasiirka ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay dowlada Somalia wadahadal la furaan sidii ay u qaabili lahaayeen qaxootiga qasabka lagu soo celinayo. Wasiirka ayaa shalay shaaciyay in 80.000 qof wadanka laga musaafurin doono sanadkaan. Qorshaha wasiirka ayaa ah mid si weyn u saameynaya soomaalida dhawaan magalyada ka dalbatay Sweden iyo kuwii horey diidmo loo siiyay. Wasiirka ayaa u muuqda mid hadda u soo jeestay sidii uu dadka uga nadiifin lahaa Sweden.
Dowlada Sweden ayaa sii adkeynaysa siyaasadeeda soo galootiga, iyadoo hadda xisbiyada wadanka ay tartan ugu jiraan xisbiga noqonaya kan ugu siyaasada adag dhinaca socdaalka iyo soo galootiga.